Truth be known: Bogyoke, his daughter, and Burma
ကျွန်တော်တို့ဗမာတွေဟာ ဗိုလ်ချူပ်လို ညဏ်ပညာအမြော်မြင်ရှိတဲ့ အာရှထိပ်သီးခေါင်းဆောင်ကိုပိုင်ဆိုင်ခဲ့ရဘူးတယ်။ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်လို မိန်းမသားပင်ဖြစ်လင့်ကစား မတစ်ထောင်ဘွားယောကျာ်းတွေထက်ရဲရင့်တဲ့ သတ္တိရှိတဲ့ ကမ္ဘာကလေးစားရတဲ့ ခေါင်းဆောင်ကိုလည်းပိုင်ဆိုင်နေရတယ်။ ဒါပေမယ့် ဝမ်းနည်းဖို့အကောင်းဆုံးက သူတို့လိုခေါင်းဆောင်တွေက ကျွန်တော်တို့ကို ရင်နင့်သားပမာအုပ်ချူပ်တာကို မခံရဖူးဘူး။ အဲဒါဘာကြောင့်လဲ။ ကျွန်တော်သိသလောက် ကတော့ စစ်အစိုးရအုပ်ချူပ်ပြီးနောက်ပိုင်း မြန်မာတွေရဲ့တန်ဖိုးအစစ်ဖြစ်တဲ့ ဖော်ရွေခြင်း၊ယဉ်ကျေးပျူဌာခြင်း၊စည်းလုံးညီညွတ်ခြင်း၊ ရိုင်းပင်းကူညီခြင်း စတာတွေဟာ တဖြည်းဖြည်းကျလာနေတယ်ဗျာ။ စစ်အစိုးရက ကျွန်တော်တို့အခြေခံလူတန်းစားတွေကို “စားဝတ်နေရေး”ဆိုတဲ့ စကားလေးလုံးထဲမှာ မထွက်နိုင်တော့အောင် အကွက်ကျကျလုပ်သွားတာဘဲဗျာ။ နောက်ဆုံး ကျွန်တော့်အသိတွေပြောလို့ သိရသလောက် အထူးသဖြင့်ရန်ကုန်မှာပေါ့။ အမှီးကျက်အမှီးစား ခေါင်းကျက်ခေါင်းစား အတွေးအခေါ်ကကြောက်ဖို့ကောင်းလောက်အောင် နယ်ပယ်အသီးသီးမှာ ပျံ့နှံ့နေတယ်ဆိုတာဘဲဗျာ။ ဆရာမခင်ခင်ထူးရေးတဲ့ အညာကကျွန်မဆွေမျိူးများ ဆိုတဲ့ အခန်းဆက်ဝတ္ထုလေးတွေ ကယ်ပေလို့ ဗျာ။ မဟုတ်ရင် တော…….
အင်း… စားဝတ်နေရေး၊ စားဝတ်နေရေး။ ၀တ်တာနဲ့ ရေးတာတော့ မသိဘူးဗျာ။ စားတောင် မစားနိုင်ကြတော့ ပါဘူး။ မြင်တတ်မယ်ဆို ဝေးဝေးကြည့်စရာ မလိုပါဘူး။ ရန်ကုန်လိုမြို့ကြီးမှာ ဘုရင့်နောင်တံတားဖြတ်ပြီး လမ်းမဘေးတိုက်တွေနောက်က လှိုင်သာယာ ရပ်ကွက်တွေထဲ ၀င်ကြည့်လိုက်ပါ။ ကိုယ့်ကိုယ်ကို သနားနေတဲ့လူတွေ ငါအတော် ကံကောင်းတာပဲ ဆိုပြီး ပြန်ထွက်လာပါလိမ့်မယ်။
I had been those places in Hlaing Tar Yar. I do know how people live there.
4:15 AM, November 13, 2006